Mahajanga: fitsidiana ara-pombam-panajàna | Région Boeny
Tonga nitsidika ara-pomba fanajana ny Lehiben’ny Faritra Boeny, Atoa Saïd Ahamad Jaffar ireo mpandraharaha avy ao Afrika Atsimo ny 06 septambra 2016 tao amin’ny biraony ao amin’ny Bloc Administratif Mangarivotra Mahajanga. Nitondra ny hetahetan’izy ireo te hametraka orin’asa iray izay hitrandraka ny famokarana manga eto Mahajanga.
Raha ny fanadihadiana nataon’ireo mpandraharaha dia nahatsapa izy ireo fa i Boeny no anisan’ny faritra mamokatra manga indrindra eto Madagasikara. Ka niantefan’ny safidiny.
Tonga teto an-toerana niaraka amin’izy ireo ihany koa ny tompon’andraikitry ny Orin’asa iray izay malaza amin’ny famokarana sy fiompiana antsoina hoe VINKER FARMING izay manana ny faniriny hametraka an’izay orin’asa mitrandraka manga izay hanodina io voankazo io ho lasa ranomboakazo natoraly.
Tamin’io andro io ihany no nandeha nitsidika ny toerana manodidina ny Mahajanga ny mpandraharaha ary dia teny Ambovondramanesy, distrikan’i Mahajanga faharoa amin’iny lalam-pirenena RN4 iny, no nahitany ny toerana metimety kokoa hananganana ny orin’asa. Hiara-hiasa amin’ireo tantsaha eny ifotony izy ireo hividy manga izay ahodina ao aminy orin’asa ho lasa confiture sy ranomboakazo maro samihafa ahondrana any Afrika Atsimo sy any amin’ireo firenena izany.
Marihina fa ankoatr’izay fambolena izay dia nitsidika ny seranan-tsambon’i Mahajanga ihany koa ny mpandraharaha nijery ny olana sy izay hanampiana mba ahafahana manondrana ny entana avy aty Mahajanga makany Afrika Atsimo amin’ny alàlan’ny sambo. Io orin’asa io mantsy dia manana fahaizana manokana amin’ny fametrahana ireny foto-drafitr’asa goavana ireny.
Ny fahatongavany voalohany izao dia karazany fitsidihana fotsiny aloha, fa amin’ny fiverenan’izy ireo dia hiaraka amin’ny tekinisianina maromaro hijery ny hananganana ny orin’asa sy ny fangatahana tany ary hitondra vaha-olana ao amin’ny seranan-tsambo.